Tallaabooyinka lagu soo saaro khariidada adigoo isticmaalaya darawallada - Geofumed
Talaabooyinka in ay curiyaan map a la isticmaalayo drones
Juunyo, 2017 GPS / Qalabka, topografia
Jiilka khariidada isticmaalaya farsamadani waxay noqon kartaa mushkilad weyn, mid ka mid ah dhibaatooyinkaasi waa mid aad muhiim u ah cilladaha lumista bilooyin qiimo leh oo faa'iido leh markaanad lahayn waayo-aragnimo hore shaqadan.
Aasaasayaasha Nidaamka Maaraynta Qalabka Waxay inoogu hadlaan qoraal ahaan POB Online, Kormeerayaal xagga badan oo diiradda shaqada this, marka hore kala hadlayaan nooca drone si markaas ay u bartaan, diiradda on dood of sifooyinka alaabta final doonaya in la helo, soo saara ay sabab u tahay, oo dhererkiisu aan loo baahnayn wakhti comment in.
Wajahay xaalad this, waxaa lagu talinayaa, taasoo keentay in oolnimada weyn iyo faa'iidada, waa in ay bilaabaan by natiijada in la gaaro, aqoonsashada isku xigxiga ee shaqada in la qabto si dheeraad ah loo fuliyo software drone si loo gaaro natiijada loo baahan yahay ee.
Markaa, waxaan samayn karnaa tallaabooyinka 3 si ay u qabtaan shaqada, marka hore, hubso in xogta la uruuriyay ee ku lugta leh ay tahay mid la isku halleyn karo oo sax ah; markaa, samee xogtan si aad u heshid habka kor u kaca iyo qaabka kicinta dijitalka (DEM); Ugu dambeyntii, isticmaalida qaabka la abuuray, abuurto dusha sare ee AutoCAD (ama wax la mid ah) iyo sidoo kale 'line-work' (shaqo internetka) iyo sahanka ugu dambeeya. Aynu falanqeyno tallaabooyinka lagu soo bandhigay si faahfaahsan:
Uruuri xogta ku habboon berrinka
Si ay kooxuhu u qabtaan xog ururinta saxda ah, waxaa loo baahan yahay in hawlwadeennada hore loo tababaray hababka ugu wanaagsan ee u oggolaanaya abuurista kontoroolka dhulka iyo haysashada software tijaabo ah oo loogu talagalay in lagu abuuro kartoonka sawir-qaadashada.
Xaaladda nidaamka xakamaynta dhulka drone-ka, shuruudaha la midka ah ee loo isticmaalo sawir-qaadashada caadiga ah waa in la tixgeliyaa. dhaqanka muujinaysaa in ujeedooyinka la aasaasay oo kuwan la falanqeeyay adigoo ku saabsan dhulka iyo dadka ku xeeran, si horseednimo dhigay ilaa shan gool duulaya aagga, 4 ee rukummada ku iyo xarun kasta ay awoodaan in ay ka mid ah ujeedooyinka ka badan sida ay dabeecadaha degaanka (dhibco sare ama hooseeya).
Markaas, autopilot ayaa lagu wadaa, iyada oo la tixgelinayo wax yar ka badan ay gacanta ku kasta oo labada dhinac oo ay qabsadaan laba xadhig of photos ka baxsan Isbaaro kasta oo isticmaalaya farsamada la mid ah in ee Google Earth u ogolaanaya baafinta dhulka interface ah garaafyada dejinta sare ee duulimaadka.
Helitaanka lafaha iyo DEM
Tallaabada labaad waxay tahay in la hirgeliyo sawirada ay qaadeen darawalka si loo abuuro qotofoto iyo DEM. Nidaamkan waxaad ka dooran kartaa xalalka jira ee jira ee suuqa oo tixgelinaya in geeddi-socodku uu raacayo isla caqli ahaan sida sawir-qaadashada caadiga ah. Tan waxaa loola jeedaa in sawiradu ay sare u kaceen iyada oo ku saleysan goobaha dhulka la wadaago iyadoo la adeegsanayo sawiro badan.
Waa in aan maskaxda ku hayno in darawallada ay isticmaalaan kamarado yaryar iyo kuwa aan qalabka loo isticmaalin marka la barbar dhigo kuwa lagu isticmaalo sawir-gacmeedka. Sidaa darteed, sawirro badan waa in la qaadaa si loo gaaro heer sare. Taas oo muujinaysa, waayo, dhibic kasta oo dhulka ku, lacagta u dhaxaysa 9 iyo 16 sawirada, oo ay farsamada aqoonsiga image adeegsaday 'kaabadood' barnaamijka soo xulay loo aqoonsado photos la wadaago.
Ka saarista dusha kor u qaadista iyo shaqeeya internetka
Waa tallaabo la soo dhaafay in shirkadaha ugu badan la talinta ee sahanka ay ku adag tahay ka badan, sababtoo ah barnaamijyada Tusaale fiican ugu 3D (tusaale ahaan Civil 3D) aan loogu tala galay in la daydo dusha ballaaran ahbaa shaqeeyaan barnaamijyada drone-ka. Taasina waa sababta ay xal u helidda xeeldheeraha ay u soo baxaan sida kuwa saxda ah hawshan.
Iyadoo kuwaani, sahamiyuhu wuxuu dooranayaa dhibcaha shaqada adoo gujinaya dhibcooyinka la rabo ee muuqaalka dijitaalka ah. Mid kasta oo ka mid ah ayaa ka diiwaan gashan barnaamijka iyada oo ah labada isuduwid.
dhibic kasta waxaa ka dibna ku yaal layers u dhigma heshiisyada la aasaasay by Civil 3D (ama isticmaalka) si marka aad furto file ee dhibcood barnaamijka leeyihiin qaab la mid ah kuwa ka soo saldhigga ah GPS Heerka rover ama wadarta guud.
Ka dib qaabkan shaqada waxaa lagu gaari karaa wakhti iyo lacag lagu kaydiyo mashaariicda maareynta shaashaadka, oo lagu qiyaaso 80% waqtiga kaydka. Waanu xaqiijin karnaa marka la barbardhigo qabashada dhibcooyinka ee sahaminta caadiga ah ee ay sameeyeen khibrad ku jirta dhibcaha 60 saacad kasta iyada oo la adeegsanayo dhibcaha 60 ee lagu qaato barnaamijka labaad ee software-ka kadib.
Ugu dambeyntii, marwalba xusuusnow furaha guusha iyo kaydinta wakhtiga shaqadu waa inuu ogaado habka shaqo ee haboon ee soo saari doona natiijada la rabo ee ugu haboon.
Post Previous«Previous Isbarbardhigga isbeddellada ka dhacay sida file CAD a
Post Next dhibcood Import iyo dhalin model ah dhul digital in file CAD aNext »